Amabali EBhayibhile: Ukuthembela Kuncedo LukaThixo - IWebhsayithi Esemthethweni YamaNgqina KaYehova
ABANTU abamalunga nama-50 000 bahamba uhambo olude ukusuka eBhabhiloni ukuya eYerusalem. Kodwa ekuﬁkeni kwabo, iYerusalem ilinxuwa nje elikhulu. Akukho mntu uhlala apho. AmaSirayeli kufuneka eqale phantsi ukwakha yonke into.
Enye yezinto zokuqala azakhayo sisibingelelo. Le yindawo enzela kuyo amadini ezilwanyana, okanye izipho, kuYehova. Iinyanga ezimbalwa kamva amaSirayeli aqalisa ukwakha itempile. Kodwa iintshaba ezihlala kumazwe akufutshane azifuni amaSirayeli ayakhe. Ngoko zizama ukuwoyikisa ukuze ayeke. Ekugqibeleni, ezi ntshaba zibangela ukumkani omtsha wasePersi enze umthetho wokuyekisa umsebenzi wokwakha.
Kuqengqeleka iminyaka. Ngoku li-17 leminyaka okokoko amaSirayeli abuyayo eBhabhiloni. UYehova uthumela abaprofeti bakhe uHagayi noZekariya ukuxelela abantu ukuba baqalise ukwakha kwakhona. Abantu bathembela kuncedo lukaThixo, baze babathobele abaprofeti. Baqalisa ukwakha kwakhona, nakubeni umthetho usithi akufuneki bakhe.
Umthetheli omgumPersi ogama linguTatenayi uyeza aze awabuze amaSirayeli ukuba analo na ilungelo lokwakha itempile. AmaSirayeli ayamxelela ukuba xa ayeseBhabhiloni, uKumkani uKoreshi wathi kuwo: ‘Hambani ngoku niye eYerusalem nize nakhe itempile kaYehova, uThixo wenu.’
UTatenayi uthumela ileta eBhabhiloni aze abuze enoba uKoreshi, oﬁleyo ngoku, watsho ngokwenene kusini na. Kungekudala iyabuya ileta ivela kukumkani omtsha wasePersi. Ithi okunene uKoreshi watsho. Yaye kule leta ukumkani uthi: ‘Wavumeleni amaSirayeli akhe itempile yoThixo wawo. Yaye ndiniwisela umthetho wokuba niwancedise.’ Malunga neminyaka emine itempile sele igqityiwe yaye amaSirayeli avuya gqitha
Kudlula eminye iminyaka emininzi. Ngoku phantse kuyiminyaka engama-48 okokoko itempile yagqitywayo. Abantu eYerusalem bahlwempuzekile, yaye isixeko kwanetempile kaThixo azikhangeleki zintle. Emva eBhabhiloni, umSirayeli onguEzra uva ngemfuneko yokulungisa itempile kaThixo. Ngaba uyazi ukuba wenza ntoni?
UEzra ubonana noArtashashta, ukumkani wasePersi, yaye lo kumkani ulungileyo unika uEzra izipho ezininzi xa ebuyela eYerusalem. UEzra ucela amaSirayeli aseBhabhiloni ukuba amphathise ezi zipho ukuya eYerusalem. Malunga nabantu abangama-6 000 bathi baza kuhamba. Banesilivere negolide eninzi kwanezinye izinto ezixabisekileyo abazithwalayo
UEzra unexhala, kuba kukho abantu abangendawo endleleni. Aba bantu banokuyohlutha isilivere negolide yabo, baze bababulale. Ngoko uEzra ubabuthela ndawonye abantu, njengokuba ubona kulo mfanekiso. Bathandaza kuYehova ukuba abakhusele kuhambo lwabo olude ukubuyela eYerusalem.
UYehova uyabakhusela. Yaye emva kweenyanga ezine zohambo, baﬁka benqabisekile eYerusalem. Ngaba oku akubonisi ukuba uYehova unokubakhusela abo bathembela kuye?
Ezra isahluko 2 kuse kwese-8.
Bangaphi abantu abathabatha uhambo olude bevela eBhabhiloni besiya eYerusalem kodwa bafumanisa ntoni xa beﬁka?
Aqalisa ukwakha ntoni amaSirayeli akuﬁka, kodwa zenza ntoni iintshaba zawo?
Ngubani uHagayi noZekariya, yaye bathini ebantwini?
Kutheni uTatenayi ethumela ileta eya eBhabheli, yaye ufumana yiphi impendulo?
Wenza ntoni uEzra akufumanisa ukuba kufuneka alungise itempile kaThixo?
Kulo mfanekiso uEzra uthandazela ntoni, yaye uphendulwa njani umthandazo wakhe, yaye oku kusifundisa ntoni?
Funda uEzra 3:1-13.
Ukuba ngenye imini sikwindawo engenalo ibandla labantu bakaThixo, simele siqhubeke sisenza ntoni? (Ezra 3:3, 6; IZe. 17:16, 17; Heb. 13:15)
Funda uEzra 4:1-7.
Nguwuphi umzekelo uZerubhabheli awawumisela abantu bakaYehova ngokuphathelele ukunxulumana nabantu bezinye iinkonzo? (Eks. 34:12; 1 Kor. 15:33; 2 Kor. 6:14-17)
Funda uEzra 5:1-5, 17 nesesi-6:1-22.
Kwakutheni ukuze abachasi bangakwazi ukuwuyekisa umsebenzi wokwakha? (Ezra 5:5; Isa. 54:17
Oko kwenziwa ngamadoda amakhulu amaYuda kubakhuthaza njani abadala abangamaKristu ukuba bafune ulwalathiso lukaYehova xa bejamelene nabachasi? (Ezra 6:14; INdu. 32:8; Roma 8:31; Yak. 1:5)
Funda uEzra 8:21-23, 28-36.
Yintoni eyenziwa nguEzra esimele siyenze nathi, ngaphambi kokuba senze nantoni na? (Ezra 8:23; INdu. 127:1; IMize. 10:22; Yak. 4:13-15)